काठमाडौं, १२ पुस: मङ्गलवार शेयर बजारमा निकै उच्च उतारचढाव देखापरेको छ । यस दिन परिसूचक २५ दशमलव शून्य ४ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ७ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम भने बढेर रू. ५९ करोड ५३ लाख पुगेको छ कुल बजार पूँजीकरण रू. १५ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । यस दिन १ सय ३० कम्पनीको ४ हजार ८ सय १८ पटकको व्यापारबाट १० लाख ४१ हजार २ सय २० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले ओभर शोल्ड जोन अथवा २३ दशमलव ५९ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको विक्री चाप बढेको देखाउँछ ।
बीमा समूहको परिसूचक २ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ । एनबी इन्स्योरेन्स बाहेक कारोबारमा आएका सबै बीमा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य घटेपछि यस समूहको परिसूचक १ सय ९१ अङ्कले घटेको हो । त्यस्तै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक २ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, जलविद्युत समूहको परिसूचक १ दशमलव ८१ प्रतिशत, बैङ्किङको १ दशमलव ७८ प्रतिशत, विकास बैङ्कको १ दशमलव ४४ प्रतिशत, होटलको शून्य दशलमव ९९ प्रतिशत र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशलमव ४७ प्रतिशतले घटेको हो ।